Kaody fanodinam-potoana: isaky ny ora isan'andro dia kaody fidiovana hafa (Cydia) | Vaovao IPhone
Omaly fotsiny aho dia niresaka momba ny tweak iray izay namela famantaranandro roa hafa napetraka teo amin'ny efijery fanidiana hahafahanao manamarina ny ora ao an-tanàna misy ny fianakavianao na maninona tsy, amin'ny fahalalana fotsiny ny ora any Etazonia (ohatra). Ity tweak ity dia antsoina Famantaranandro izao tontolo izao7 ary izany dia ao amin'ny repo an'ny BigBoss $ 1.50. Raha te hijery ny fomba fiasa ianao dia afaka mahita ny lahatsoratra nosoratanay omaly tao amin'ny iPad News amin'ny fipihana ny rohy amin'ireo andalana voalohany amin'ity lahatsoratra ity. Fa androany tsy hiresaka momba ny famantaranandro hidin-trano isika fa momba ny iray amin'ireo fiovana mahaliana indrindra hitako teo amin'ny lafiny fiarovana: TimePasscode. Midika izany fanovana izany fa isaky ny ora isan'andro dia misy kaody fanidiana hafa. Ohatra, raha 10:23 dia ny teny miafina hidirana amin'ny iPad dia: "1023". Andao hojerentsika akaiky ity tweak mahafinaritra ity.
Ny fiarovana ny iPad dia azo antoka raha tsy misy mahalala fa manana TimePasscode napetraka ianao
Ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny fametrahana ny tweak; Mba hanaovana izany, miditra amin'ny Cydia isika ary mikaroka amin'ny motera fikarohana «TimePasscode». Ny tweak dia azo zahana amin'ny maimaimpoana amin'ny repo ofisialy BigBoss. Raha te-hisintona ny TimePasscode dia kitiho ny "Install" eo ankavanan'ny efijery ary ataovy ny lohataona asain'i Cydia hataontsika.
Araka ny nolazaiko anao, tsotra ny mekanikan'ny Passcode: ny kaody hidin-trano an'ny iPad dia ho fotoana irintsika hamahana ny terminal; ohatra, raha amin'ny 11:00 dia ho 1100 ny kaody mamoha. Ny iPad dia ho voaro raha tsy misy mahalala ny fisian'ny TimePasscode.
Raha vantany vao tafiditra ao anatin'ny toe-javatra isika, afaka manova ny masontsivana sasany isika avy amin'ity tweak maimaim-poana ity:
Avelao hamaha ny kaody marina: Mba hiasa ny TimePasscode dia ilaina ny manana kaody hidin-trano hohahetsika amin'ny iPad ary noho izany dia tsy maintsy mametraka kaody manokana isika. Raha manamarina an'ity bokotra ity isika dia milaza amin'ny TimePasscode fa raha mampiditra an'io kaody manokana io isika dia afaka mamoha ny iPad ihany koa.
Kaody passcode miverina: Fa kosa, afaka mametraka fiarovana ambony kokoa amin'ity bokotra ity isika. Ny kaody dia tsy ho ny fotoana fa ny fotoana avy eo ankavanana ka hatramin'ny ankavia; raha amin'ny 10:23, raha hampavitrika an'ity bokotra ity isika dia: 3201.
Noho izany, ity tweak ity dia manome antsika kaody hidy marobe isaky ny isa-minitra Inona no mitranga. Ankafizo ny fiarovana atolotry ny TimePasscode!
Fanazavana fanampiny - World Clock7: Mametraha famantaranandro roa hafa eo amin'ny efijery (Cydia)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Kaody fanodinam-potoana: isaky ny ora isan'andro dia kaody fidiovana hafa (Cydia)